Bachelor or higher degree in Risk Management, Accounting, Finance, Financial Engineering, Statistics, Mathematics or ant related.
Minimum5years experiences in risk and fraud management inabanking or financial technology business
Professional certifications (FRM, CIA, CPA CFE, etc.) would beaplus
Strong English language (speaking, reading & writing)
Self-starter and self-driven with ability to work inafast-paced environment and manage multiple tasks in parallel
TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။
စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတန်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com